Iindaba -Sifumana iSatifikethi soVavanyo lweGolide
Sifumana iSatifikethi soVavanyo lweGolide
Nge-29 Okt., 2020
Ekuqaleni kuka-Novemba, 2020, u-Hebei Lanwei Imp. Kunye no-Exp.Co., Ltd wajoyina uMthengisi oqinisekisiweyo owasungulwa ngu-Alibaba
Igolide kunye noMthengisi ngumthengisi okumgangatho ophezulu oqinisekiswe ngamandla anegunya kwiAlibaba Platform. Ngokudityaniswa kweintanethi kunye nokungaxhunyiwe kwi-intanethi, iqonga lenza ukungqinisisa, ukungqinisisa kunye nokuhambisa amandla onke abarhwebi, njengokufumana isiqinisekiso seshishini, isiqinisekiso sempahla kunye nesakhono seshishini Ukongeza kwiinkonzo zamalungu aphumayo, amalungu kaJinping-Cheng Ishishini likonwabela amalungelo awodwa okuthengisa, izigcawu ezingaphambili ezikhethekileyo kunye namalungelo esixhobo esityebileyo.
Ukusukela nge-1 kaJulayi ngo-2018, i-Jinping-Cheng Enterprise iye yaba ngumthengi okhethekileyo, kwaye kuphela ngabathengisi baseTshayina abanenqaku leenkwenkwezi zabarhwebi beenkwenkwezi ezi-1 okanye ngaphezulu abanelungelo lokuthenga. Abathengi abakwinqanaba le-Star abathenga amashishini eJinping-Cheng baya konwaba kwezi zilandelayo 8 amalungelo kunye nemidla:
1. Ukomelela kwesazisi: icala lomthengi eligcweleyo lokuhambisa amandla ekhonkco, isazisi somthengi weenkwenkwezi ngokukhangela
2. Ivenkile ethandwayo ethandwayo yeJinpin-Cheng Enterprise: iphepha lasekhaya levenkile edumileyo enezinga eliphezulu lokuchonga, ukulingwa kwasimahla kwitemplate yasesitolo ethandwayo, ukubonakalisa ubukhulu becala lolwazi lodidi, ukuphucula amava abathengi okuthenga
3.Ukuhlolwa okupheleleyo kwefektri: ukungqinisisa yinkampani egunyazisiweyo, ukuboniswa kwemiboniso emininzi yokwenyani, ukuntywila, ukuthembela kuphindaphindiwe
4. Izibonelelo zeakhawunti encinci: Ulawulo lweakhawunti yeqonga liza kuphuculwa, kwaye izibonelelo ezongezelelweyo zee-akhawunti ezingaphantsi ezi-5 ziya kunikwa
5. Umdlalo wokudlala umdlalo: Iimeko ezifanayo zikhethwa kwindawo yomnyhadala wesiza
6. Ilungelo lokuthengisa: Ilungelo elilodwa lokuthenga iimveliso zentengiso ekhethekileyo kwiMiboniso yedayimane
7. Uhlobo lweshishini lwegosa ledatha: elungelelanisiweyo, amandla okuqonda idatha, zazi wena, uyazi ishishini, wazi okhuphisana nabo
8.Ukudlula kwabathengi kwishishini: ukuhlanganiswa kolwazi lwabathengi abaninzi, ulawulo lwabathengi olusempilweni, ukulandelela okuchanekileyo
Ngoku lixesha ledatha enkulu, ngakumbi kwiinkampani ze-e-commerce, ezifuna inkxaso yedatha enkulu, ukuwela umda nge-e-commerce akukho ngaphandle.Sihlala siphucula kwaye siphucula, siya kukhonza abathengi ngobuchwephesha bobuchwephesha.